Akụkọ - Akpachapụ anya maka ụmụaka yi mkpuchi PM2.5
Nlekọta maka ụmụaka na-ekpuchi nkpuchi PM2.5
Ihe nkpuchi PM2.5 maka ụmụaka ga-enwekwa mmetụta ụfọdụ. Ngwaahịa dị mma nwere ike igbochi ọtụtụ mmetọ ikuku. Mmetụta ha bara uru ga-emetụta ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mkpa, dị ka ụdị mmetọ ikuku, dịka ma oke nke masks ahụ kwesịrị ekwesị, dịka otu esi eyi ihe mkpuchi mgbochi haze.
Nke mbụ, anyị kwesịrị ị paya ntị na ngwaahịa ụmụaka. Maka ebumnuche nchekwa, anaghị atụ aro ụmụ afọ 0-2. Maka ụmụ ọhụrụ gbara 0-2, ọbụlagodi na ha na-eyi ngwaahịa ụmụaka, enwere ihe egwu nke iku ume, yabụ gbalịa iji ha. Ọ dị mkpa iji dochie ihe nkpuchi ahụ rụrụ arụ kama ihicha ya; ọ bụrụ na nkpuchi PM2.5 ga - ejigharị ya, ekwesịrị ịchekwa ya na akpa akwụkwọ dị ọcha maka ojiji ọzọ. Mgbe i yichara ihe mkpuchi PM2.5, saa aka gị nke ọma iji hụ na ịdị ọcha dị. Mgbe ejiri ya, biko buru ya tupu atụba ya n'ime ebe mkpofu ahịhịa. Ihe nkpuchi PM2.5 bụ ngwaahịa ọcha nke onwe ma enweghị ike ịkekọrịta. Ọ bụrụ n ’ị chere na ihe nkpuchi ahụ adịchaghị mma dịka na mbụ, ịkwesịrị iji nke ọhụrụ dochie ha.
Igwe iku ume PM2.5
Nke abuo, ihe nkpuchi PM2.5 ndi okenye ji adighi nma. Ihe nkpuchi ụmụaka adịghị mfe ịzụta, nke ghọrọ nkwenye nke Baoma. Ọtụtụ ndị nne na nna ga-ahapụ ụmụ ha ka ha yiri ma ọ bụ ghara iyi akwa ndị okenye ma ọlị n'ihi na ha enweghị ike ịchọta nke kwesịrị ekwesị. Wearmụaka na-ekpuchi ihe mkpuchi nchedo ọkachamara, mana ihe nkpuchi PM2.5 a ma ama nwere mmetụta adịghị mma. Otu n’ime ọghọm dị na ya bụ ume ume iku ume, nke na-emekarịrị ụmụaka ahụ iku ume. Na mgbakwunye, ihe nkpuchi haze anti nwere ike zute nsogbu ndị ọzọ mgbe ejiri ha. Dịka ọmụmaatụ, ụmụaka na-adọta ihe nkpuchi PM2.5 n'ihi iku ume na-adịghị mma ma ọ bụ nkasi obi ndị ọzọ, ma ọ bụ na ha enweghị ike isi ọnwụ na ị ga-ekpuchi ihe mkpuchi nchebe n'ihi atụmatụ ha. Irè nke nchedo dabere n'ikike nke ndị ọrụ iji na-ekwusi ike iyi ha na gburugburu ebe obibi na-emetọ ihe mmetọ. N'ihe banyere ọnọdụ ikuku na-adịghị mma, ụmụaka kwesịrị belata ihe omume ha n'èzí, nọrọ n'ime ụlọ dị ka o kwere mee, ma tụlee ị airụ ikuku purificatio
Nke gara aga: Igwe mkpuchi gị a na-eyi n'ụzọ ziri ezi?